အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Thura~mywiki - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာဘာသာ ဝီကီပီးဒီးယားက ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ...။ အသုံးပြုသူ၏ စာမျက်နှာ ဆိုတဲ့စာမျက်နှာမှာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ ရေးခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...။ =) --Lagoonaing ၀၆:၅၂၊ ၂၈ မေ​ ၂၀၁၁ (UTC)
Unfortunately, your account clashes with another account also called Thura. To make sure that both of you can use all Wikimedia projects in future, we have reserved the name Thura~mywiki that only you will have. If you like it, you don't have to do anything. If you do not like it, you can pick outadifferent name.
၀၃:၅၅၊ ၁၈ မတ်​ ၂၀၁၅ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Thura~mywiki&oldid=235325" မှ ရယူရန်
၁၉ ဧပြီ ၂၀၁၅၊ ၁၀:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။